नेकपा एमाले – doodhmati || dudhmati
Home / Tag Archives: नेकपा एमाले
Tag Archives: नेकपा एमाले
एमालेका ४१ समानुपातिक सांसद, नवीना लामादेखि मोतिलाल दुगडसम्म (सूचीसहित)
February 11, 2018	समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, माघ २८ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ सांसद बन्नेको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। एमालेले समानुपातिक तर्फ ४१ सिट जितेको थियो। जसमध्ये एमालेले संघीय संसदमा एक तिहाई महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न ३७ जना महिलालाई पठाएको छ। एमालेबाट सांसद बन्ने चार पुरुषमा खस आर्यबाट मुकुन्द न्यौपाने, आदिवासी …
प्रदेश २ को प्रमुख विपक्षी नेताका लागि एमालेमा चुनाव हुने ।। शत्रुधन महतो र सत्यनारायण मण्डल बीच प्रतिस्पर्धा
February 3, 2018	समाचार 0
दूधमती समाचारदाता जनकपुरधाम, माघ २० । प्रदेश २ को प्रदेशसभामा मधेसी गठबन्धनपछि दोस्रो ठूलो दलको रुपमा उपस्थित भएको नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन नै हुने भएको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले २१ सिट सहित तेस्रो ठूलो दल हो । २९ सिट भएको पहिलो दल संघीय समाजवादी फोरम …
एमालेले छान्यो ७५ समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य (सूचीसहित)
December 29, 2017	राजनीति, समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, पुस १४ । नेकपा एमालेले प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाएको छ। एमालेको स्थायी समिति बैठकले बन्दसूचीमा समावेश उम्मेद्वारको नामबाट सांसद चयन गरेको हो। एमाले सिफारिसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि उनीहरुले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाउनेछन्। प्रदेशसभातर्फ समानुपातिकको २ सय २० सिटमध्ये एमाले एक्लैले ७५ सिटमा जित हात पारेको …
धनुषामा एमालेपनि, क्षेत्र नम्बर ४ मा रघुबिर महासेठ निर्वाचित ।। खानेपानी मन्त्री पराजित
December 11, 2017	समाचार 0
सुजीतकुमार झा जनकपुरधाम, मंसिर २५ । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रघुबिर महासेठ २२ हजार ५ सय ३२ मत ल्याई विजयी भएका छन । मतगणनामा शुरुदेखि पछाडी रहेका महासेठले अन्तिम केही घण्टामा अगाडी आएका छन । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काँग्रेसका महेन्द्र यादवको १९ हजार ९ …
यस्ता छन् समानुपातिक उम्मेदवार, धनुषाबाट चन्द्रकालदेवी सिंह, श्रीप्रसाद साह र जुली महतो
October 31, 2017	समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, कातिक १४ । नेकपा एमालेले उद्योगपति मोतीलाल दुगडलाई पहिलो नम्बरमा राख्दै प्रतिनिधिसभातथाप्रदेशसभातर्फको समानुपातिकउम्मेदवारकोबन्दसूचीतयार पारेको छ। एमाले सूचीमाखसआर्यतर्फ स्थायी कमिटी सदस्यमुकुन्दन्यौपाने, महिलातर्फ पूर्वमन्त्री राधा ज्ञवाली, दलिततर्फ राष्ट्रियसभाका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रीतपासवान, जनजाति पुरुषतर्फ विजय सुब्बा, जनजातिमहिलातर्फ थममायाथापाशीर्ष स्थानमाछन्। एमालेले बन्दसूची सच्याउने अन्तिमदिन सोमबार निर्वाचनआयोगमासूचीबुझाएको थियो । एमाले बुझाएको सूचीमा सोमनाथअधिकारी …
जेलमा रहेका व्यक्तिलाई एमालेले चुनाब लडाउने, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट योगनारायण यादवको नाउँ सिफारिस
October 5, 2017	समाचार 0
दूधमती समाचारदाता जनकपुरधाम, असोज १९ । नेकपा एमालेले संसदको चुनाबको उम्मेदवारीका लागि जेलमा रहेका एकजना नेताको नाउँ सिफारिस गरेको छ । एकवर्षदेखि जेलमा रहेका योगनारायण यादवलाई धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट सिफारिस गरिएको छ । धनुषाको धनुषाधाममा आज बसेको क्षेत्रिय कार्यसमितिको बैठकले यादवका अतिरिक्त प्रभावशाली नेता सुधिरप्रसाद साह र …
एमालेको निर्णयः माओवादीसहित सबै वामपन्थीसँग तालमेल ।। तालमेलको जिम्मा स्थानीय पार्टी कमिटीलाई
October 1, 2017	राजनीति, समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौं, असोज १५ । नेकपा एमालेले आगामी चुनावमा वामपन्थी दलहरुसँग तालमेल र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले सत्तारुढ माओवादीसँगको तालमेलको प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चुनावको रणनीति र उम्मेदवारबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा काठमाडौंमा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक …
२ नम्बर प्रदेशमा एमालेका ८ नेताको कमाण्ड, कसको जिम्मेवारी कुन जिल्लामा?
July 28, 2017	राजनीति, समाचार 0
दूधमती समाचारदाता काठमाडौ, साउन १३ । नेकपा एमालेका नेताहरू भोलिबाट क्रमश: २ नम्बर प्रदेश जाने भएका छन्। केन्द्रीय सचिवालयले तोकेको जिम्मवारी अनुसार २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीका लागि नेताहरूले त्यता जाने तयारी थालेका हुन्। पार्टी प्रचारविभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा पहिले भोलि घनश्याम भूसाल रौतहट जाँदैछन्। यस्तै …
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमाले जितेर देखाउँछः रत्नेश्वर लाल गोइत, नेता नेकपा एमाले
July 13, 2017	बातचित 0
प्र. तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तपाईहरु कसरी गरी रह्नु भएको छ ? पहिलो चरण र दोस्रो चरणभन्दा अझै राम्रो स्थिति तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउने छ । हामी तराईका अधिकांश प्रमुख नगरपालिका जितेर देखाई दिने छौँ । प्र. जनकपुरमा त तपाईहरुको उम्मेदवार नै भेटाई रहेको छैन नि …
एमालेमा जनकपुरका मेयरका लागि ७ जनाको नाउँ सिफारिश, अमरनाथ गुप्ता र दिपेन्द्र यादवको नाउँ अग्रपंक्तिमा
May 10, 2017	राजनीति, समाचार 0
सुजीतकुमार झा । जनकपुरधाम, बैशाख २७ । जनकपुरमा मेयरका लागि उम्मेदवारहरुको नाउँ छनौटका लागि विभिन्न पार्टीहरु सक्रिय रहेको बेला नेकपा एमाले पनि सो छनौट कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । पहिलो चरणमा ७ जनाको नाउँ आएको छ । जसमध्ये एमालेका क्षेत्रिय अध्यक्ष सुद्योधन यादव, नगर इन्चार्ज राजकिशोर चौधरी, नगर सचिव उमेश …